Golaha Wasiirrada Somaliland Ee Maanta Oo Qodobbo Ka Soo Saaray Nabadgelyada Xaaladda Xanuunka – WARSOOR
Golaha Wasiirrada Somaliland Ee Maanta Oo Qodobbo Ka Soo Saaray Nabadgelyada Xaaladda Xanuunka
HARGEYSA – (WARSOOR) – Fadhigii 74aad ee golaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland oo uu shir guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, kuna wehelinaayey Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo ku qabsoomay habka Maqalka iyo Muuqaalka ah ee (Video Conference), ayaa maanta lagu lafo-guray arrimaha amniga dalka, xanuunka covid 19 iyo diyaar garowga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka.
Ugu horreyna goluhu waxa uu warbixinno ka dhegeystay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo warbiximo la xidhiidha amniga dalka iyo dedaalka loogu jiro in nabad lagu dhammeeyo dirirtii beelaha walaalaha ah ee gobolka Sool gaar ahaan Ceel-biyoodka dhabar-dalool ee deegaanka xuddun. Sidoo kale waxa goluhu warbixin ka dhegeysay wasiirka horumarinta caafimaadka oo golaha xog ka siiyey xaaladda uu marayo xanuunka covid 19.
Waxaanu goluhu shirka ka dib soo saaray qodobbo:-
1) Goluhu isagoo ka duulaya nabad waarta oo laga gaadho dirirta ku dhexmartay beelaha walaalaha ah ceel-biyoodka Dhabar-dalool wuxuu go’aamiyey in Xukuumaddu sii xoojiso, si buuxdana uga hawl-gasho nabadaynta deegaanka gobolka Sool, gaar ahaan goobaha ay colaaddu ku dhex-martay labadaa beelood. Iyadoo xukuumaddu xoojinaysa taageerada ay la barbartaagan tahay waxgaradka, waayeelka, odayaasha iyo haweenka nabadda jecel ee ku hawllan nabadaynta. Goluhu waxa uu Alle uga baryey naxariis iyo dembe dhaaf 19-kii qof ee ku dhintay colaadaas, waxaanay u ducaynayaan in uu caafiyo intii dhaawacyadu ka soo gaadheen dirirtaasi.
Somaliland Iyo Taiwan oo ka Wada-hadlay Ka midho-dhalinta Cilaaqaadkooda